Kernel 4.12 inoenderera mberi nekuvandudzwa kwayo kazhinji | Linux Vakapindwa muropa
Kernel 4.12 inoenderera mberi nekuvandudza kwayo zvakajairika
Semazuva ese vhiki rega rega, Kernel 4.12 yakaburitsa vhezheni nyowani, kunyanya ivo vatove mune yechitatu mukwikwidzi vhezheni. Izvi zvinoreva kuti kune vhiki rimwe chete shoma kuti iyo yakagadzika vhezheni vhezheni isunungurwe, iyo isu tese takamirira.
Uyu wechitatu kuburitswa mumiriri senguva dzose yakagadzirisa mabugs uye zvikanganiso zvakaonekwa mune rakapfuura kuburitswa mumiriri. Ivo vakatarisa zvakare kuvandudza vatyairi vese senguva dzose.
Nguva ino akavandudza madhiraivha eGPU, SCSI vanodzora uye vatungamiriri veNVME pakati pevamwe. Vakagadziridzawo XFS faira system pakati pedzimwe shanduko diki. Pasina kupokana, iyo yekuvandudza iyo ine mashoma shanduko, sezvazvinowanzoitika mune iyi mhando yekuvandudzwa.
Shanduko chete iri kunze kweyakajairika ndeye Intel p nyika mutyairi zvinyorwa zvinyorwa, iyo yakashandurwa kubva kune yechinyakare doc fomati kuenda kuRST fomati.
Pasina kupokana, Kernel 4.12 tiJan anotaridzika kwazvo uye iyi yechitatu RC inomiririra zvakakwana, nekuti isu tichiona kuti hapana shanduko huru, zvinoreva kuti hapana kana mhosho dzekugadzirisa. Nekudaro, kuchine mamwe mashoma mushanduro vhezheni vakasara vasati voburitsa vhezheni yepamutemo.
Iyo yepamutemo vhezheni yakarongerwa kutanga kwaJuly, asi hazvizivikanwe kuti zvichave zvezuva rechipiri, kana kuti richava rezuva 2. Izvi zvinoenderana nenhamba yeshanduro dzevamiriri, nekuti kana vakaburitsa shanduro nomwe, tichava nadzo pazuva 9. Zvisinei, kana yechisere vhezheni ichidikanwa RC, izvi zvaizobuda muna Chikunguru 2, zvichinonoka kuburitswa yeiyo yepamutemo vhezheni kusvika zuva repfumbamwe.
Kana iwe usingakwanise kumirira zvakare uye iwe unoda edza iyi RC vhezheni izvozvi, Unogona kuzviita senguva dzose kuburikidza newebsite yepamutemo ye kernel.org, mauri uchafanirwa kudhawunirodha mainline vhezheni. Ehe, yeuka kuti haina kugadzikana uye kuti haifanire kushandiswa munzvimbo dzakapfava dzekusimudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kernel 4.12 inoenderera mberi nekuvandudza kwayo zvakajairika
Fontbase, akanakisa font maneja wevagadziri
Peppermint 8, iyo yakareruka distro yezvose, yave kuwanikwa kune wese munhu